Inona ny marika ivelany malaza indrindra eto an-tany?
Arc 'Teryx （Canada): ny marika ambony ivelany any Canada, natsangana tao VANCOUVER, Canada tamin'ny 1989, ny foibeny, studio famoronana, ary ny tsipika famokarana lehibe dia mbola ao Vancouver ihany. Noho ny fikatsahany asa tanana vaovao sy ny haitao vaovao, tao anatin'ny folo taona mahery, lasa nitombo ...
Covid-19 dia nitondra fiatraikany lehibe sy fitsapana ho an'ny indostrian'ny mpivarotra eran-tany
Tamin'ny tapany voalohan'ny taona 2020, ny fipoahan'ny coVID-19 tampoka dia nahatonga ny indostrian'ny mpivarotra manerantany, anisan'izany ny indostrian'ny akanjo, hanana fiatraikany lehibe sy fitsapana. Eo ambany fitarihan'ny komity foibe CPC, ny fihatsaran'ny fisorohana sy ny fanaraha-maso ny valanaretina any Shina dia nihatsara hatrany, ny ...
Mivoaka amin'ny ririnina, tontolo iainana samihafa, fotoana samy hafa, lalana samihafa, vanim-potoana samihafa, safidy akanjo ivelany dia samy hafa. Ka ahoana no safidinao? 1. Fehy ireo fitsipika telo ireo manomboka ao anatiny ka hatrany ivelany, dia ireto: ny sosona hatsembohana-sosona hafanana-sosona tantera-drivotra. Amin'ny ankapobeny, ny s ...
Iray amin'ireo orinasam-barotra any Shina, izay mana-pahaizana manokana amin'ny fitafiana mandritra ny 10 taona mahery. Ny vokatra lehibe dia misy ny Jacket, Parka, Waistcoats, pataloha, Shorts, amin'ny ankapobeny, ny karazan'akanjo rehetra, toy ny Raincoat, Rain poncho. Ary koa ny danton'ny mandohalika, ny fehin-tànana, ny lamba famaohana haingana, ny plastika azo entina ...